Volkatoa ugwu mgbawa: njirimara, nhazi na eruptions | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe anyị na-ezo aka na aha Krakatoa anyị na-ezo aka na agwaetiti mgbawa ugwu nke dị na Sunda Strait nke mpaghara Lampung, n'etiti Java na Sumatra, Indonesia. Ọ bụ ezie na a na-akpọ ya Ugwu ugwu nke Krakatoa, nke agwaetiti a nwere cones 3 mgbawa ugwu. Ọ ghọrọ onye ama ama maka oke ọdachi ọ kpatara na 1833 mgbe mgbawa ugwu gbapụrụ agwaetiti ahụ niile wee metụta mpaghara ndị kacha nso.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mbido, nguzobe na njirimara nke ugwu ugwu Krakatoa.
2 Ihe mgbawa nke Krakatoa
3 Ihu igwe, flora na fauna
Indonesia bụ mba nwere ugwu mgbawa n'ihi na o nwere ugwu ọgbụgba ọkụ dị otu narị na iri atọ, karịa mba ọ bụla n'ụwa. Mpɛn pii no, ɛyɛ a na wonni adagyew koraa sɛ wobesua kasa foforo na ama wɔatumi asusuw asɛm no ho. Ugwu nke Krakatoa bụ stratovolcano, nke mejupụtara lava, ash, pumice, na ihe ndị ọzọ.
Agwaetiti a dị kilomita iri na itoolu n’ogologo, kilomita ise n’obosara ma nwee ebe ihe dị ka kilomita iri abụọ na asatọ. Lakata nke dị na ndịda dị mita 9-5 n’elu ọkwa mmiri; Pebu Atan nke dị na mgbago ugwu dị otu narị mita na iri abụọ n’elu oke osimiri na Danan n’etiti dị mita 28-813 n’elu oke osimiri.
Ebe ọ bụ na Krakatoa bụ stratovolcano na ụdị ugwu a na-ahụkarị karịa mpaghara mpaghara subduction, ọ dị na efere Eurasia na efere Indo-Australia. Mpaghara njedebe bụ ebe a na-ebibi eriri osimiri n'ihi na mmiri iyi na-ezukọta ebe ahụ. N'ihi ya, otu efere tectonic na-emikpu n'okpuru ọzọ.
Tupu ugwu mgbawa nke 1883, Krakatoa so na obere ìgwè nke agwaetiti ndị dị nso: Lang, Venlaten, na agwaetiti Poolsche Hoed, yana obere agwaetiti ndị ọzọ. Ndị a bụ ndị foduru nke gara aga nnukwu-ọnụ ọgụgụ nke mgbawa ugwu na-agbawa, nke mere mgbe ụfọdụ na oge ochie ma guzobe ogologo kilomita 7 ogologo ma ọ bụ ịda mbà n'obi n'etiti ha. Ihe foduru nke ugwu mgbawa oge ochie malitere ijikọ, na mgbe ọtụtụ afọ gasịrị, n'ihi ọrụ nke efere tectonic, ndị cones jikọtara ọnụ iji mepụta Island Island Krakatoa.
Ihe mgbawa nke Krakatoa
A maara ugwu mgbawa nke Krakatoa dị ka otu ugwu na-emebi ihe nke na-emebi emebi. N'ezie, a na-eji ugwu mgbawa mara ugwu ndị nwere ugwu n'ihi ihe mgbawa ha n'ihi na lava ha nwere ọtụtụ ọkụ na-egbu mmụọ na andesite na dacite, nke na-eme ya nnukwu viscous ma na-eme ka ikuku gas na-ewuli elu ruo n'ọkwa dị elu.
E nweghị ihe ndekọ doro anya nke oke mgbawa ugwu. Na 416 d. C., a kpọtụrụ aha na ihe odide "Pararaton ma ọ bụ Akwụkwọ nke Ndị Eze" na akụkọ ihe mere eme nke ndị eze East Java. C. E nwere mgbawa nke na-egosipụtabeghị na akụkọ ntolite. Eleghi anya, na AD 535. C. Mgbawa ahụ mere ihe karịrị ọtụtụ ọnwa, nke nwere nnukwu mmetụta na ihu igwe nke ugwu ugwu.
O yiri ka enwere ntiwapụ abụọ na 1681, nke a hụrụ ma dekọọ na ederede nke ndị Dutch na-akwọ ụgbọ mmiri John W. Vogel na Elias Hesse. N'afọ ndị sochirinụ, ọrụ ugwu mgbawa ahụ ka dị oke egwu, mana ọ dapụtara ma ọ dịzịghị njọ nye ndị bi na ya. Ọbụna ná mmalite 1880s, a na-ewere ugwu mgbawa nke Krakatoa ka ọ nwụọ n'ihi na nnukwu ogbunigwe ikpeazụ mere na 1681. Mana, ọnọdụ a na-achọ ịgbanwe.
Na May 20, 1883, Perbuatan malitere ịpụta ájá na ntụ. N’ụtụtụ ụbọchị ahụ, onyeisi ụgbọ mmiri ndị Jamanị bụ́ Elizabeth kọrọ na o nwere hụrụ igwe ojii dị ihe dị ka kilomita 9-11 n'ogologo n'àgwàetiti Krakatoa a na-ebighị ebi. Ka ọ na-erule etiti ọnwa June, ọ fọrọ nke nta ka ebibi ndagwurugwu Perbuatan. Ọrụ ahụ akwụsịghị, mana n'ọnwa Ọgọst, ọ nwere nnukwu ọdachi.
N'ihe dị ka elekere 1 nke ụtụtụ na Sọnde, Ọgọstụ 26, Krakatoa nwetara mgbawa izizi mbụ ya, ebe ntiwapụ ntị chiri mepụtara igwe ojii nke irighiri irighiri sO toro kilomita iri abụọ na ise n’elu agwaetiti ahụ ma gbasaa n’ebe ugwu ruo mgbe ọ ruru ma ọ dịkarịa ala kilomita 25 n’ogologo. Ihe kacha njọ mere n'echi ya: n'ihi nrụgide a gbakọtara, e nwere mgbawa 4 n'ụtụtụ, nke fọrọ nke nta ka ọ gbapụ agwaetiti ahụ. N’August 1883, ihe ntiwapụ anọ bịara bibie agwaetiti ahụ kpamkpam.
A na-ewere mkpọtụ ahụ dị ka ụda kachasị ukwuu n'akụkọ ihe mere eme wee mebie egbugbere ọnụ nke ndị nọ nso na mpaghara ahụ. A nụrụ ụda a ihe dị ka kilomita 3.110 site na Perth, Western Australia na Mauritius. N'ihi mgbawa ahụ na-eme ihe ike, mbufịt mere, ebili mmiri ahụ ruru ihe dị ka mita 40 wee kwaga n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Sumatra, West Java na agwaetiti ndị dị nso na ọsọ nke ihe dịka 1.120 kilomita kwa awa. Ndị nwụrụ anwụ karịrị puku iri atọ na isii.
Uzuzu na gas nke ugwu ugwu Krakatoa weputara na 1883 no na mbara elu rue ihe dika afo ato. Ugwu ahụ dapụsịrị kpamkpam wee mepụta ndagwurugwu ọhụrụ, ọ bụ na 3 ka mpaghara ahụ malitere igosi mgbaàmà nke ugwu mgbawa. Ọhụrụ agwaetiti mgbawa pụtara na 1927 ma mesịa kpọọ ya Anak Krakatoa (nwa nke Krakatoa). Agwaetiti ahụ na-eto ka afọ na-aga.
Ihu igwe, flora na fauna
Agwaetiti ahụ nwere ihu igwe na-ekpo ọkụ ma nwee ihu igwe dị n'etiti 26 Celsius na 27 Celsius. Oke oke ogbugbu ahụ kpochapụrụ ihe niile dị na mpaghara wee pụta na 1927 dị ka ugwu Anak Krakatoa. Ma na mkpokọta, enwere ụdị osisi 40.000 na Indonesia, tinyere osisi 3.000 na orchid 5.000. Ala mgbada ugwu nke mpaghara a bụ nke ahịhịa mmiri ozuzo na-achịkwa, ebe ndịda nke ala ndịda na-ejikwa mangroves na nkwụ.
Anụmanụ ahụ nwere ọtụtụ ụdị si mpaghara okpomọkụ nke Africa na America, mana agwaetiti ọ bụla nwere ụdị dị iche iche. Orangutans naanị ike hụrụ na Sumatra na Borneo; agụ na Sumatra na Java, bison na enyí na Java na Borneo, naanị tapir na siamang na Sumatra.
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ugwu ọkụ nke akararịị akara tupu na mgbe ọ gasịrị na akụkọ ntolite. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ọkụ ọkụ Krakatoa na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Volkano Volkano